Ogaden News Agency (ONA) – Shir ka furmay magaalada Lund
Shir ka furmay magaalada Lund
Shir caalami ah oo lagaga hadlayo arimaha haweenka Geeska Afrika ayaa wuxuu ka furmay magaalada Lund ee wadanka Sweden, shirkaasoo socon doona inta u dhexeysa 23-25 September.
Shirkan oy iskakaashadaan, dawlada hoose ee magaalada Lund, jaamacada Lund iyo urur Somaali ah ayaa sanad walba ka dhaca magaaladan.
Shirkan oo ah kii tobnaad ee noociisa ah ayaa sanadkan ciwaankiisu yahay “Doorka ay haweenku ku leeyihiin nabadda iyo Horumarka -Role of Women in Promoting Peace and Development-.
Sharkan oo ay ka soo qayb galeen haween badan oo Soomaali ah oo ka kala socday dacalada aduunka ayaa laga jeediyay warbixino ka xog waramaya xaaladaha ay ku suganyihiin haweenka Soomaaliyeed iyo dhibaatiiyinka ka soo gaadha dagaalada sokeeye.
Marwo Ruqiya Xusseen Aabi oo ku hadlaysa codka haweenka Soomaalida Ogadenia ayaa khudbad xogwaran ah ka soo jeedin doonta shirka maalintiisa labaad oo bari ah oo qadaa dhigi doonta gobood-falka ay ciidamada Itoobiya u gaystaan haweenka Somaalida Ogadenia.
Shirakan ayaa waxa dawlada gumaysiga Itobiya uga soo qaybgali jiray madax ku sheega sare lakiin laga bilaabo sanadkii hore way ka gaabsadeen in ay ka soo qayb galaan shirkan caalamiga ah sababta ay uga soo qayb gali waayeena oo ah in ay kala kulmaan shirkan waji gabaxa
Wixii faahfaahin ah ee shirkan caalamiga ah ka soo kordha kala soco wararka danbe.